प्रधानमन्त्रीलाई वुहानबाट नेपाली विद्यार्थीको पत्र, ‘तपाइँहरुले बजाइरहेको बाँसुरी र सारंगी हेरेर आफैलाई चि’थोरीरह्यौं’ – ताजा समाचार
प्रधानमन्त्रीलाई वुहानबाट नेपाली विद्यार्थीको पत्र, ‘तपाइँहरुले बजाइरहेको बाँसुरी र सारंगी हेरेर आफैलाई चि’थोरीरह्यौं’
काठमाडौं। को’रोना भा’इरसको इपिसेन्टर मानिएको चीनको हुबेई प्रान्तमा रहेको वुहानबाट एक नेपाली विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेकी छिन् । वुहानमा रहेकी प्रमिला देवकोटाले आफूहरु कोठामा थुनिएर बसेको यतिका दिन वितिसक्दा पनि आफ्नो देशको सरकारले उद्धार नगरेकोमा वुहानमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेको बताएकी छिन् । उनले सामाजिक संजालमा अपिलसहित पोष्ट गरेको पत्र यस्तो छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू ।
तपाइहरुलाई हिजो राम्रो निन्द्रा पर्यो होला। हामी यहाँ चीनको हुवेइमा भएका विद्यार्थीहरु भने रातभर तपाई लगायतका नेताहरुले बजाइरहेको मुरली हेरेर आफैलाई चिथोरीरह्यौं । हामीले अझै पनि घर फर्कने समयको केही खबर पाएनौं। हामी यहाँ हरेक मिनेट नेपालका समाचार हेरेर विताइरहेका छौं, हाम्रो घर फर्कने समाचारको आसमा।
त्यो समाचार त पाएनौं तर तपाईहरुले बाजा बजाइरहको तस्वीर भने पायौं। हामी तपाई रोम ज’ल्दा बाँसुरी र सारंगी बजाउने नीरो हो त भन्दैनौ। तपाईका विगतका काम हेर्दा हामीलाई लाग्दैन तपाईको मुटु त्यति क’ठोर छ। तर तपाईले पक्कै मान्नुपर्छ हामी अ’त्यासिएका छोराछोरी जस्ताको मनमा अझै आस नदेखाएर तपाईले आफूमा सम्वेदना भने नभएको पुष्टी गर्नुभएको छ।
हामी अहिले नेपाल सरकारलाई किन बोझ भयौ भनेर छलफल गरिरहेका छौं। हाम्रा नजिकैका भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सका जनताभन्दा हामी किन फरक भयो भनेर सोच्यौं। यहाँ डाक्टर पढेका देशमा काम गरेका वा अन्य पेशामा लागेका र अगाडि पढ्न आएका युवायुवती छन्। उनीहरु सोच्दछन् देश बन्न त भूगोल मात्रै काफी हुन्न। देश भूगोलमा बस्ने जनताले बनाउँछ।
अ’त्यास कस्तो हुन्छ, जीवन गु’माउने ड’र कस्तो हुन्छ, भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जति कसले बुझ्नुभएको होला। तर तपाईलाई नै हाम्रो अ’त्यास मेटाउने ह’तारो किन नगर्नु भएको भनेर पनि छलफल गयौं।
देशमा स्रोत छैन्, ठीक हो नहुनु आफैमा दो’ष होइन। तर स्रोत जुटाउन नसक्नु त्यो दो’ष हो। जनता मगन्ते मात्रै मानिरहने र राज्य भएको महसुस नै नहुने कस्तो देश बनाउनुभयो तपाईहरुले ? हामी यहाँ सोच्दैछौ कुनै दाता तपाइकाहाँ हामीलाई १४ दिन लगिदिने प्रस्ताव लिएर किन आइदिएन ?
त्यो सहरमा हामी अट्ने ठाउँ खोज्न तपाईहरुले चीनले अस्पताल बनाउँने भन्दा बढी समय लगाउनुभयो। तपाईहरुलाई काम गर्न नपर्ने र राज्य चलाउन पाइरहने किन बनायौ हामीले ? त्यो सोचेर पनि आफैलाई चि’थोर्न मन लाग्छ।
कुन समय आउँछ नागरिकको जीवनमा जब उसलाई लाग्छ, यस्तो देशमा किन जन्मिए ? हामीलाई पहिलोपटक यस्तै लागेको छ। आस छ, हामी यहाँ सकुशल हुँदै हाम्रा बा जस्तो प्रधानमन्त्रीले बुझेछन् र घर आइयो भन्न पाइयोस् र हाम्रा अर्का रातहरु आसमा अ’त्यासिएर बाच्न नपरोस्।
हामी वुहानमा अ’त्यासिएका नेपाली
यस्तै,चीनले संयुक्तराज्य अमेरिकालाई नोवल को’रोना भा’इरसका कारण उत्पन्न महामारी नियन्त्रणमा ल्याउन चीनले गरिरहेको प्रयत्नलाई वस्तुपरक, निष्पक्ष, शान्तपूर्ण र बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाबाट सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनयिङले भाइरससँग जुध्न चीनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य पनि अमेरिकालाई अनुरोध गर्नुभएको छ । बोला, सा’र्स र म’र्सजस्ता भा’इरसको महामारीका तुलनामा चीनमा यस पटक सरकारको विशेष सतर्कता र स्वास्थ्यकर्मीको व्यापक परिचालनका कारण को’रोना भा’इरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा रहेको चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीहरुले बताएका छन् । प्रवक्ता चुनयिङले को’रोना भा’इरसको महामारी रोक्न चीन सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
को’रोना भा’इरसको महामारी वि’रुद्ध लड्न चीन सरकार र जनताले कुनै कसर बाँकी नराखेको बताउँदै उहाँले यस महामारी फैलन नदिनेतर्फ भइरहेका प्रयासमा निकै प्रगति भइसकेको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता चुनयिङले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार चीनबाट अमेरिका आउनेलाई प्रवेशमा क’डाई गर्न लागेको घोषणा गरिएको विषयमा सोधिएको एक प्रश्नमा उक्त धारणा राख्नु भएको हो ।
अत्यास कस्तो हुन्छ, जीवन गुमाउने डर कस्तो हुन्छ, भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जति कसले बुझ्नुभएको होला। तर तपाईलाई नै हाम्रो अत्यास मेटाउने हतारो किन नगर्नु भएको भनेर पनि छलफल गयौं।